Mukhaadaraadka iyo galbeedka Afrika - BBC News Somali
Mukhaadaraadka iyo galbeedka Afrika
Image caption Xoghayihii Hore ee Qaramada Midoobey Kofi Annan
Guddi heer sare ah oo ka soo jeeda dalalka Galbeedka afrika oo ay hoggaaminayaan xoghayihii hore ee Qaramada Midoobey Kofi Anan iyo madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo ayaa ku taliyay in xanibaada laga qaado nooc ka mid ah daroogada ama maan-dooriyaha.
Waxay si gaar ah u xuseen xashiiska oo si aad ah looga isticmaalo waddamada ku yaala galbeedka afrika.
Tallaabadan ayaa daba socoto isku day kan la mid ah oo sannadkii hore ka dhacay dalalka Latin Amerika oo ah meesha inta badan laga soo saaro daroogada nooca cocaine-ta. Britain waxay ka mid tahay waddamada mamnuucay xashiiska.
Guddigan ayaa sheegaya in shabakadaha caalamiga ah ee ka gannacsada mukhadaraadka ay dhibaato ku hayaan waddamada galbeedka, oo ay xittaa sababeen dagaallo salka ku haya mukhadaraadka iyo in ay dhacaan afgabi militari sida afgambiyadda ka dhacay dalalka Mali iyo Guinea Bissau.
Warbixinta uu guddigan soo saaray ayaa waxay ku sheegeen in ay tahay in si buuxda sharciga lala tiigsado shabakadaha ka gannacsado mukhataraadka.
Balse waxay ku doodayaan in aanay wax faa'ido ah soo kordhinaynin in xayiraad lagu soo rogo oo dambi sii ahaato isticmaalka mukhadaraadka sida xashiiska marka qofka uu si shaqsi u isticmaalayo.
Waxay sheegayaan in xabsiyaddii ay buux-dhafsheen dad loo soo qabqabtay isticmaalka noocan mukhadaraadka, iyo sidoo kale in ay dhiiri-gelinayso musuqmaasuqa dhinaca booliska iyo garsoorka.
Warbixintu waxa lagu soo gabagabeeyey in dad aan sida aadka u isticmaalin mukharadaadka ay u baahanyihiin in la caawiyo oo aanay u baahnayn in la ciqaabo.
Isticmaalka mukhadaraadka ama maandooriyaasha sida sharci darada ah loo adeegsado waxa la dareemay in dhibaato ba'an ku hayaan waddamada galbeedka Afrika markii uu billaabanayey qarnigan.
Waqtigaa iyada ah, dadaallada lagu joojinayay in cocaine-ta laga soo safriyo waddamada Latin America lana gaarsiiyo waddamada ay kunoolyihiin macamiisha isticmaala ee Maraykanka iyo Yurub ayaa waxa ka dhashay in shabakadaha ay bilaabaan in ay bartilmamaydsadaan oo ay wado cusub ka sameystaan galbeedka Afrika.
Arrintan ayaa waxay sababtay in ay badato isticmaalka mukhadaaradka gobolkaasi Afrika.